10 Halmar In A Lifetime Destinations | Save A tareenka
Guriga > safarka Europe > 10 Halmar In A Lifetime Destinations
Safarka tareenka, Tareen safarka Shiinaha, Tareen Safarka Japan, Tareenka Safarka Noorway, Tareen safarka Ruushka, Tareenka Safarka Switzerland, safarka Europe
Cidlada galay, ama hoos ilaa kan ugu weyn reef-ka adduunka, hoostooda Northern Lights, kuwani waa 10 meelaha hal mar nolosha lagu tago. Sidaas, haddii aad Kenya ka raadinayso tacabur lama ilaawaan ah, ama meel kasta oo u dhaxaysa Mongolia iyo Moscow, markaa waa inaad hubisaa meelahan.
Mid ka mid ah meelaha duurjoogta ah iyo meelaha ugu xiisaha badan adduunka oo dhan, Masai Mara kaydka qaranka waa meel nolosha oo dhan hal mar ah. Ilbaxnimo lama taabtaan, Masai Mara waa safar safar oo heer sare ah. Waxaa intaa dheer, ah keydka dabiiciga ayaa hoy u ah socdaalka ugu badan ee aduunka, oo raad ku reeba booqde kasta. Sidaas, marag ka ah hayaanka weyn; bisadaha duurjoogta ah, zebras, iyo bahalo kale oo badan oo dhowr mitir u jira deegaankooda quruxda badan ee dabiiciga ah waa waayo-aragnimo nololeed oo beddeleysa.
Sidaas, Haddii aad rabto in aad gasho tacabur nololeed oo isbedelaysa mid ka mid ah kaydadka dabiiciga ah ee ugu xiisaha badan adduunka, waxaad kala dooran kartaa inaad cirka kor ugu baxdo adigoo raacaya buufin hawo kulul ama 4X4. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad qorsheysaa fasaxa safariga inta u dhaxaysa Julaay iyo Sebtembar, in aan goob joog ka ahaado bahalkii ugu yaabka badnaa ee maamula waddooyinka iyo dhulka Kenya, xiligii tahriibka.
2. Halmar In A Lifetime Destinations: Macchu Picchu
Ku qarsoon buuraha Andes, laga tagay laakiin aan la ilaawin magaalada Machu Picchu. Waxyaabaha quruxda badan ee boqortooyadii Inca waxay u taagan yihiin qarniyo badan oo cimilo duurjoog ah, diyaar u ah inuu la wadaago waxyaalaha qarsoon ee boqortooyadii Peruvian kumanaan booqdayaasha ah oo yimaada maalin kasta, cagta, baska, iyo tareen.
Markaad booqanayso Machu Picchu, waxaa kugu wareeri doona baaxadda iyo meesha ay ku taal magaalada qadiimiga ah. Sida magaaladan weyn loo dhisay loona ilaaliyo meel dhexe oo Peru ah, waa qarsoodi. Si kastaba ha ahaatee, Qarsoodiga ugu weyn ayaa ah sababta ay dadka deggani uga tageen Machu Picchu. Sidaas, Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad ku biirto safarrada badan ee la hagayo ee dhismaha oo isku day inaad ogaato. Waxaa intaa dheer, waxaad arki doontaa mid ka mid ah dhaqamada iyo meelaha ugu xiisaha badan aduunka. Sayidka, Iska hubi inaad ballansato safarkaaga nolosha-hal-mar ee aad ku aado Machu Picchu ASAP gudaha 2022.
3. Tareenka Trans-Mongolia ee ka socda Moscow ilaa Mongolia
Laba ka mid ah meelaha ugu caansan adduunka waa Siberiya iyo Mongolia. Thanks to gaadiidka casriga ah ee tareenada, maanta waxa uu qofku u safri karaa labadaba hal safar, iyada oo la sii marayo tareenka Trans-Mongolia. Tagaya Moscow, iyada oo loo marayo St. Petersburg iyo Lake Baikal, Saxaraha Gobi, oo soo gaadhay Beijing, Trans-Mongolia waa safar cajiib ah.
Ma aha oo kaliya inaad ka heli doonto aragtiyo cajiib ah daaqadaada tareenka, laakiin waxaad heli doontaa fursad naadir ah oo aad kaga gudubto 6 soonaha waqtiga. Halka ay tani ka mid tahay tareenka ugu dheer aduunka, Trans-Mongolia safarka tareenka waa mudan in la qaado. Sidaas, haddii aad raadinayso tacabur nololeed oo isbedelaya, markaa waa in aad bilawdo qorshaynta safarkaaga aad ku aadi doonto noloshaada hal mar xagaaga soo socda.
4. Halmar In A Lifetime Destinations: Tromso, Norway
Kulanka Aurora waa waayo-aragnimo nololeed oo wax ka beddeleysa, meesha ugu fiican ee kulankaan xiisaha lehna waa magaalada Tromso. Wadnaha aagga aurora, Arctic-ka Norway, Waxaad arki kartaa nalalka ugu quruxda badan ee muujinaya adduunka. Spirals, fallaadho, daahyada, iyo bilicda iftiinka dabiiciga ah ayaa ah muujinta nalalka cirifka, laga arki karo oo keliya meelaha sare, sida gobollada Antarctic iyo Arctic.
Kaliya 5.5 saacadaha London tareen, Meeshan nolosha hal mar ah ayaa ah mid aad u fudud in la gaaro. Meesha dhexe ee cajiibka ah, baararka waaweyn, Maqaayadahana waxay soo jiitaan socdaalayaasha adduunka oo dhan. Waqtiga ugu fiican ee lagu xaqiijin karo riyadaada dhabta ah waa Disembar ilaa Maarso aragtida ugu wanaagsan ee Nalalka Waqooyi ee Norway.
5. Baali, Indonesia
Kulaylaha, cagaaran, xasilloon, Baali waa janno dhulka iyo mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya 5 meelaha hal mar nolosha lagu tago. Hoy macbadyo qadiimi ah, Dhaqanka Balinese, cajiib ah fasax deegaan-saaxiibtinimo kirooyinka, iyo hoy, oo leh aragtiyo soo jiidasho leh, Bali waa safar aan la ilaawi karin.
Sayidka, dadka u safraya Bali waxay la kulmaan aragtida iyo jawiga ugu sixirka badan adduunka, iyada oo aan la xusin muuqaallada ka tagaya hadal la'aan iyo cabsi ka hor dabeecadda sharafta leh. Intaa waxaa dheer, dooxooyinka cagaarka ah, iyo waterfalls cajiib ah, samee sawir u eg kaadhka boostada iyo meel ay dhammaan rabaan inay tagaan, ugu yaraan hal jeer nolosha.
6. Halmar In A Lifetime Destinations: Great Barrier Reef, Australia
Iskala bax 900 jasiiradaha iyo in ka badan 2000 km, Xeebta weyn ee barrier reef ee Australiya waa meel riyo u ah quusiste kasta iyo xiiseeyste. Xeebta badda ee cajiibka ah waxay ku taal Queensland, meesha aad ka arki karto 1500 noocyada kalluunka, fauna cajiib ah, iyo coral qurux badan.
The Greater Barrier Reef waa dhul yaab leh oo badda hoosteeda mara. Sidaas, haddaad nasiib leedahay, Waxaad weli arki kartaa qaar ka mid ah makhluuqa taariikhi ka hor oo ku dabaalanaya dhinacaaga. Sidaa darteed, alaabahooda bacaha aad, snorkeling ama qalabka quusitaanka, Safarka nolosha-mar-mar-a-nolosha ah ee Great Barrier Reef ee Australia.
7. Kapadosiya, Turkiga
Raacitaanka buufinka hawada kulul ee Kapadocia ee Turkiga waa tacabur maskaxeed. Waxaa intaa dheer, inta aad hawada ku jirto, Waxaad arki doontaa buufinnada hawada kulul ee midabada leh iyo muuqaalka foolkaanada ee Kapadocia. Si kastaba ha ahaatee, haddaad ka cabsato meelaha dhaadheer, dabadeed daawashada buufinnada hawada kulul qolkaaga huteelka ama kafateeriyada dibadda, waxay noqon doontaa waayo-aragnimo aan la ilaawi karin.
Marka laga soo tago degdega adrenaline ee ku jira daruuraha, Waxaad arki doontaa weynaanta dhulka gaarka ah ee Kapadokiya. Tusaale ahaan, Dooxada Monks waxaa ka buuxa qaabab dhagax ah oo qiiq u samaysan oo dhulka oo dhan ka taagay. Waxaa intaa dheer, Guryihii Age Bronze iyo kaniisadaha lagu xardhay buuraha, Waa goobo cajiib ah oo lagu booqdo Kapadokiya. Si aan u soo koobo, Kapadokiya waxay hoy u tahay meelo aadan arki doonin meel kale oo adduunka ah.
8. Halmar In A Lifetime Destinations: Swiss Alps The
Swiss Alps The waa meel aan la ilaawi karin wakhti kasta oo sanadka ah, laakiin jiilaalka waxay si gaar ah u qurux badan yihiin. Inta lagu jiro guga iyo xagaaga waxaad ku raaxaysan kartaa socodka iyo ciyaaraha dibadda, xilliga jiilaalka waa inaad isku daydaa kabo barafka. Haa, kabo barafku waa ciyaar jiilaal oo gaar ah, iyo kabo ku habboon, waxaad sahamin kartaa wax badan oo ku saabsan muuqaalka Alpine.
Ciyaaraha jiilaalka ee gaarka ah ayaa bilaabmay agagaarka 6,000 sanado ka hor waxa uu noqday mid caan ka ah buuraha Swiss Alps ee barafka leh. Laga soo bilaabo Chamonix iyo Mont Blanc ilaa Ecrins Beerta Qaranka, waxaad ku raaxaysan kartaa muuqaalada buuraha ee ugu quruxda badan marka aad ku socoto baraf. Si xisaabo waxyaabaha kor, Alps-ka Swiss waxaa loo yaqaan meel loo aado liiska baaldiyada, laakiin kabo barafka ayaa ka dhigay mid ka mid ah 10 meelaha hal mar nolosha lagu tago.
Barafleyda, buuraha quruxda badan, kaymaha, lagoon nadiif ah, Patagonia ee Argentina waa janno socod dheer. Intaas waxaa sii dheer, wadooyin buuxa iyo muuqaalo cajiib ah, Beerta glacier qaranka ee Patagonia waa meel nolosha oo dhan hal mar ku taal Waqooyiga Ameerika.
Marka lagu daro waddooyinka socodka caadiga ah, Socdaal aad u xamaasad badan ayaa kori kara glacier-ka Rio Negro, tusaale ahaan. In si kale loo dhigo, waxaad isku arki kartaa adigoo kor u fuulaya barafaysan, buur baraf leh adrenaline iyo waayo-aragnimo gaar ah. Tani waa mid ka mid ah waxyaabaha aan caadiga ahayn ee aad ku samayn karto Patagonia cajiib ah.
10. Halmar In A Lifetime Destinations: Japan
Waqti u dhexeeya badhtamaha Maarso iyo Abriil Japan waxay ku soo baxdaa ubaxyo casaan iyo caddaan ah oo cherry ah. Midabada ubaxa Sakura ee Kyoto, Tokyo, iyo magaalooyin kale oo ku jira jawi sixir iyo farxad. Sixir aan la dafiri karin, inta lagu guda jiro ubax Sakura, Japan waxay ku dhacdaa hurdo, xasilooni gaar ah ayaa daboolaysa nolosha xawaaraha sare leh ee Japan. Jawiga gaarka ah wuxuu soo jiitaa malaayiin booqdayaal ah oo u safraya Japan fasaxa gu'ga.
Sayidka, haddi aad waligaa fursad u hesho inaad meel fog u safarto wakhti sixir ah, markaas guga Japan waa wakhtiga ugu habboon ee la booqan karo. Marka lagu daro isku dayga cunnada deegaanka, macbadyo dahab ah oo booqanaya, iyo dhismooyinka dhaadheer ee Tokyo ee maskaxda ku haya, Ku-cunto qaadashada geedaha Sakura hoostooda waa waayo-aragnimo nololeed oo hal mar ah.
Waxaan ku Save A tareenka waxay ku farxi doontaa inay kaa caawiso qorsheynta safarka kuwaan 10 Mar In A Lifetime Destinations adduunka oo dhan.
Ma doonaysaa in aad ku dhejiso bartayada boggaga "10 Mar In A Lifetime Destinations" ee boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Fonce-lifetime-destinations%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)